Abenzi be-Iron Iron Teapot - Abahlinzeki be-China Cast Iron Teapot & Factory
insimbi yetiye yensimbi Phakathi kwezinhlobonhlobo zetiye eziningi, okumhlophe, okuntekenteke nokugqamile, kungafaniswa nezitokisi zetiye zobumba; ihlotshiswe ngemesh noma ngombala onemibala, futhi izinga licacile, ngomqondo wobulukhuni wobuciko; isitayela esikhanyayo, ukuma okuhlukile kwezindebe zetiye ezimise okomgqomo nezinkomishi zetiye ezimise uvemvane; ingadlala indima ekulondolozeni ukushisa, futhi kulula ukuyiphatha, futhi ingasetshenziswa ukubeka izipuni, iziphuzo zetiye ngombala woqweqwe lwetiye Itiye ipuleti, ngabantu abaningi betiye bamukelekile. Nokho, koqweqwe lwawo itiye ubeka ukudluliswa ukushisa fas ...
cast iron teapot Cishe ku-Yuan Dynasty, ubuchwepheshe boqweqwe lwaqala ukusabalala naseChina. Isethi yetiye elihlanganisiwe lenziwa esikhathini seJingtai seMing Dynasty (1450-456), esingabizwa ngokuthi “ubuciko bezandla obugqamile boqobo”. Ngesikhathi sokubusa kuka-Emperor Qianlong weQing Dynasty (1736-1795), i-cloisonne koqweqwe lwaqala ukusabalala kusuka esigodlweni sobukhosi kuya kubantu. Kungashiwo ukuthi lokhu kungukuqala komkhakha woqweqwe lwawo waseChina. Ekuqaleni kwekhulu lama-20, koqweqwe lwawo ...
I-cast iron teapot yafakwa ngo-1800ML Cishe ku-Yuan Dynasty, ubuchwepheshe boqweqwe lwaqala ukusabalala naseChina. Isethi yetiye elihlanganisiwe lenziwa esikhathini seJingtai seMing Dynasty (1450-456), esingabizwa ngokuthi “ubuciko bezandla obugqamile boqobo”. Ngesikhathi sokubusa kuka-Emperor Qianlong weQing Dynasty (1736-1795), i-cloisonne koqweqwe lwaqala ukusabalala kusuka esigodlweni sobukhosi kuya kubantu. Kungashiwo ukuthi lokhu kungukuqala komkhakha woqweqwe lwawo waseChina. Ekuqaleni kuka-20 c ...
I-cast iron teapot yafakwa ngo-1800ML eGibhithe lasendulo kungumsuka woqweqwe lwawo, futhi ethulwa kamuva eYurophu. Uqweqwe lwawo lwensimbi olusetshenziswa kabanzi namuhla luqale eJalimane nase-Austria ekuqaleni kwekhulu le-19. Cishe ku-Yuan Dynasty, ubuchwepheshe boqweqwe lwaqala ukusakazekela eChina. Isethi yetiye elihlanganisiwe lenziwa esikhathini seJingtai seMing Dynasty (1450-456), esingabizwa ngokuthi “ubuciko bezandla obugqamile boqobo”. Ngesikhathi sokubusa kuka-Emperor Qianlong weQing Dynasty (173 ...
I-cast iron teapot yafaka i-800ML yaseGibhithe lasendulo imvelaphi yoqweqwe lwawo, futhi kamuva yethulwa eYurophu. Uqweqwe lwawo lwensimbi olusetshenziswa kabanzi namuhla luqale eJalimane nase-Austria ekuqaleni kwekhulu le-19. Cishe ku-Yuan Dynasty, ubuchwepheshe boqweqwe lwaqala ukusakazekela eChina. Isethi yetiye elihlanganisiwe lenziwa esikhathini seJingtai seMing Dynasty (1450-456), esingabizwa ngokuthi “ubuciko bezandla obugqamile boqobo”. Ngesikhathi sokubusa kuka-Emperor Qianlong weQing Dynasty (1736 ...
Sakaza yensimbi teapot enameled 500ML